ပြင်ပက Wall ဆောက်လုပ်ရေး | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan - wallpro.com.tw
ပြင်ပက Wall ဆောက်လုပ်ရေး ဖြစ်စဉ်ကို:
ပြင်ပခိုင်မာတဲ့ detection-> အမြင့်ဖိအား cleaning->3~ 8 ကြိမ်အခုလဲအပြင်ပန်း wall-> အမှတ်တရ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုခြစ် repair-> Flating-> Prime အပေါ်ယံပိုင်း once-> နှစ်ကြိမ်ဆေးသုတ်ကာကွယ်ခြင်း> အလယ်တန်း coating- မော်ဒယ်ပြုပြင်ခြင်း
ChengLin ဆန်းသစ်တီထွင်ကုမ္ပဏီကြွေကြွေပြားမြို့ရိုးဟောင်းတိုက်ခန်းများနှင့်သစ်တွေ refurbished နှင့် refurbished ထားပါတယ်,အသစ်တစ်ခုစတင်“အခမဲ့ brickwork နည်းလမ်း”.နိပွန် Paint စနစ်၏မျိုးဆက်သစ်မှတဆင့်,အဟောင်းကိုတိုက်ခန်းပြင်ဆင်မှုဆေးသုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အဆောက်အဦးပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးတို့ကိုတွဲနိုင်ပါ,အဆိုပါတံခါးပိတ်ပြားမြို့ရိုးကိုမျက်နှာပြင်၏တိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်နှင့်လျင်မြန်စွာဆောက်လုပ်ရေးအဆောက်အဦး၏အသွင်အပြင်ကို update နိုင်ပါတယ်,အဆိုပါ tile ကိုထွက်ခေါက်ဖို့အချိန်ဖျက်သိမ်းရေး,မြို့ရိုးအမျက်နှာပြင်မထိုးဖောက်မှရေမော်လီကျူးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်,မြို့ရိုးကိုကင်ဆာများ၏ဖြစ်ပျက်မှုလျှော့ချ,နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အချိန်ချွေတာ,နေသမျှကာလပတ်လုံးအဆောက်အဦး၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့် ပတ်သက်. ရက်ပေါင်း 60 အတွင်းပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်,နှင့်ကုန်ကျစရိတ် 50 ဖြစ်ပါသည်%အစဉ်အလာကြွေကြွေပြားအပြင်မြို့ရိုးကိုထက်လျော့နည်း.အဆိုပါရေစိုခံအသှငျအပွငျမှာအနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း 30 ထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်.
ပြင်ပမြို့ရိုးကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံဆောက်လုပ်ရေး features တွေ:
မြင့်-ဖိအားရေဓါးထိုအုတ်ရိုးမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေး,နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်မြို့ရိုးအမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမှိုဖယ်ရှားပေး,လျော့ရဲထွက်ခေါက်-ကျသွားအုပ်ကြွပ်,အဆိုပါ V ကိုအားဖြင့်ထိုအုတ်ရိုးမျက်နှာပြင်ပေါ်နှင့်ပြုပြင်ရေးအက်ကြောင်း-cut နည်းလမ်း,နှင့်ထိတွေ့သံမဏိအရက်ဆိုင်ကနေသံချေးဖယ်ရှားပေး.
နိပွန်ဂျပန်မူပိုင်ခွင့်အင်္ကျီ Paint ကိုသုံးပါ,ရေ-based နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေပတ်ဝန်းကျင်.
ဒါကြောင့်မိုးရွာရွာနေဖြင့်ဆေးကြောသောအခါ၎င်းသည်အထိ 35 နှစ်တစ်ဦးရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝရှိပြီးဖုန်လျော့နည်းကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ပါသည်.ဒါဟာသန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်ဓာတုဆေးရည်များအသုံးပြုခြင်းမလိုအပ်ပါဘူး.
ဘိလပ်မြေမျက်နှာပြင်,အင်္ဂတေအလွှာ,ကျောက်ဂွမ်းဘိလပ်မြေဘုတ်အဖွဲ့,mosaic tile ကို,စသည်တို့ကို.,ဆိုရိုးသက်ဆိုင်သောများမှာ.
1. ပြုပြင်ခြင်း: ပန်းချီကားမီ, ထိုကဲ့သို့သောပျောက်ဆုံးနေထောင့်, တွင်းနှင့်မြို့ရိုးပေါ်မှာဆွန်းဗုံအဖြစ်ချို့ယွင်းချက်ကိုပြုပြင်။
2. သန့်ရှင်းရေး: ဖုန်မှုန့်, အမှုန့်တစ်ဦးတံမြက်စည်း, ဖြီး, High-ဖိအားကိုရေနှင့်ဆေးကြောနိုင်ပါတယ်; အမဲဆီ - တစ်ဦးကြားနေဆပ်ပြာဖြင့်စင်ကြယ်; မော်တာ - စသည်တို့ဂေါ်ပြား, ခြစ်အတူ .; မှို - ပြင်ပက high-ဖိအားရေလြျှော, ရေခြောက်သွေ့တဲ့အတူသုတ်ခြင်း။
ဖြည့်ပါ: တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုခြစ် level ဆေးသုတ်: မြို့ရိုးအသငျသညျအပြားအပေါ်ယံပိုင်းကိုမသုံးနိုငျသညျ, ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီး, ဒါပေမယ့်လည်းဒါဟာပါးလွှာများနှင့်အထူကိုမဖြီးဖြစ်သင့်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုခြစ်ခြင်းနှင့်အပြားအပေါ်ယံပိုင်းဆောက်လုပ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းအခါ, ကောင်းသောခွန်အားနှင့်ကြာရှည်ခံမှုရှိသင့်ပါ။ ဒါဟာ level အပေါ်ယံပိုင်းပိုကောင်းကော်, နှောင်ကြိုးကြာရှည်ခံမှုနှင့်ရေခုခံရှိသင့်ကြောင်းလိုအပ်ပါသည်။
ချောမွေ့မှု: အဆင့်ဆေးသုတ်ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်ကြိတ်ထွက်သယ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်, စစ်ဆင်ရေးထိခိုက်ကော်ဖတ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှောင်ရှားရန်စိုစွတ်သောကြိတ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဆိုပါကော်ဖတ်၏အထူမြေခံရဖို့မျက်နှာပြင်၏မာကျောသည်နှင့်အညီဆုံးဖြတ်ထားရပါမည်။ အဆိုပါကော်ဖတ်ထူဖြစ်တဲ့အခါ, သဲအမှတ်အသားများဟာအပေါ်ယံပိုင်း၏နောက်ဆုံးအလှဆင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်လတံ့သောထုတ်လုပ်ပြီးလိမ့်မည်။ ဒဏ်ငွေပွန်းစားအထည်နှင့်အတူသဲထို့နောက်တစ်ဦးကြမ်းသဲစက်နှင့်အတူပထမဦးဆုံးကြိတ်ကြိတ်သောအခါ, မျက်နှာပြင်၏ချောမွေ့ဖို့အာရုံစိုက်။ ထိုခဏခြင်းတွင်ကြိတ်ပြီးနောက်, မျက်နှာပြင်ဖုန်မှုန့်လာမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်၏ဆောက်လုပ်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ဖယ်ရှားသည်။
: ခြေရင်းအလွှာ၏မျက်နှာပြင်အစိုဓာတ်ကို content ကို 8% ထက်မကျော်လွန်စေရမည်။ လေ, မိုးရွာရွာ, မြူ, etc ၏အမှု၌, မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်းလျှောက်ထားလိမ့်မည်မဟုတ်။